Taariikhda My Butros » 5 Siyaabaha Raadi Love ee Your Life!
Last updated: Jan. 17 2021 | 2 min akhri
Waxaan nahay oo dhan si joogto ah, haddii aysan tusin ama kac ay, raadineysay ka mid ah. Qofkaas oo aan nolosheena la wadaagi kartid iyo cidda na joojin doonaa abaal marinin waxaad qaddar ee ku nool guri kiro ah ka qalafsaneyn bisad. Halkan waxaa kaliya shan siyaabood si looga fogaado in aayaha iyo isagoo xaddiyo xad-dhaaf ah oo cunto ah cat si loogu bixiyo!
Ma Class Night A
Xiisaha Common waa furaha halkan. Inay tahay waa sawir ama qoraal hal abuur leh, had iyo jeer dooran class habeenkii la socdo dantaada ah. Understanding waa wax aad u weyn marka ay timaado raadinta wehelkaaga ah. Waxaad si ay u helaan midba midka kale taas oo ah sababta noocyo badan oo qabow ka dalbanayaan qaarkeenba qaarka kale oo badan oo eccentrics degan oo ka dalbanayaan qaarkeenba qaarka kale. Sidaas darteed haddii aad doorato class habeenkii adigu xiisaynayaan in a kordhinaysaa suuraggalnimada in aad la kulmi doontaa dad uun adiga oo kale.
Baararka / Clubs
In dadka guud ahaan aan u kicin sababtoo ah iyagoo ka cabsi qaba sida ugu badan ee hada ku midba midka kale in baararka iyo dadka u malaynayso inay yihiin gurguurta ama wax. Laakiin weli ay yihiin meelaha jacaylka waa magooli karaan. Sida cabitaanka socodka dadka ha ka walwalin in qeybtii ugu badan waxa ay dadku u malayn of ama walwasho badan oo ku saabsan waxa ay tahay in aad sheegto in dareen in ay tahay wali meelo weyn oo ay ku kulmaan dadka u muuqdaan. Sida iska cad waxaan aan kula talin lahaa habeenkaas guriga socday iyaga la laakiin qaado tiradooda. Waxa ay noqon kartaa bilawga wax.
Work waa halka inta badan dadka ha ka heli jacaylka ay nolosha sida caajis sida in codadka. Sidaa daraadeed isku day in ay ku jiraan shaqo aad u jecel yihiin haddii aad awoodo oo waxaa jira fursad aad u weyn oo aad riix doonaa qof aad jeceshahay. Oo haddii aad tahay qof xishood ku wareegsan, ha ka welwelin. Haddii ay looga golleeyahay in lagu dhici, waxaa dhici doonaa. Oo haddii aan, waxaa badan kalluun dheeraad ah ee badda ku jira sida ay iyagu yidhaahdaan.
Circuit gigging waa fantastic u ah kulanka dadka. Waa sida circuit bar kaliya oo aad jebin kartaa barafka oo sheegay wax u eg, “Waxaan jecel yahay riff in aad ciyaaray.” Waa hab aad u fudud in ay buuxiyaan mid ka mid ah iyo saaxiibo badan oo jidka aad sidaa bartaan qalab muusik, haddii aadan horay u ciyaaro mid ka mid, iyo bax halkaas oo samayn Bilash qaar ka mid ah.
Ha Arko Quus
Waxaan ku qoran afar siyaabood oo aad ku kulmaan mid ka mid ah laakiin la soo dhaafay uu yahay mid u badan tahay waxa ugu muhiimsan. Waxaad si loo hubiyo in aadan soo gaarto sida aad noloshaada ku xeeran kooban helo qof oo uu dhammayn doono. Hubi in aad wax badan ka socda noloshaada iyo in la kulmo qof waa mid ka mid qayb ka mid ah shaqada oo kaliya, ma howlgalka dhan. Waxa kale oo aad leedahay si aad u tusto in aad tahay xoog ku filan oo ay kula qalafsaneyn ku nooshahay guri ijaar ah, xataa haddii aanay sida aad si gaar ah kuwaad Sheeganayseen mustaqbalkaaga. Arko kalsooni ku qaba in aad maqaarkaaga u gaar ah. Ma jiraan wax ka badan soo jiidasho ay.